25-ka Shabakadood ee Wax-soo-saarka badan & Bakhaarka Onlaynka ah ee 2022 Circle Wealth
Bogga ugu weyn Shabakadaha Wax -soo -saarka 25 ee ugu sarreeya & Ku kaydi Online 2022
Haddii aad waligaa maqashay qof sheegaya inay ku socon doonaan wax-soo-saarka, waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay waxa ay ula jeedaan. Si fudud loo dhigo, baayacmushtarku waxay ka dhigan tahay inaad ka soo dukaamaysanayso dukaanka wax-soo-saarka leh, iibinta garaashyada, ama suuqa boogaha halkaas oo aad ka heli doonto alaab gacan labaad ah oo qiimo jaban ah.
Tirada sii kordheysa ee dukaameystayaasha wax iibsada, milkiilayaasha dukaamada wax -soo -saarka waxay go'aansadeen inay dhijitaal u aadaan iyagoo abuuraya bogag internet iyo dukaanno internetka ah.
Isbeddelkan cusub ayaa ka dhigaya wax iibsiga mid habboon. Kaliya kuma raaxaysan doontid sicirka qiimaha jaban laakiin sidoo kale fududaynta dukaamaysiga raaxada gurigaaga ama xitaa xafiiska dhexdiisa.
Qodobkaan waxaa isku keenay Wareegga Maalka, waxaan eegi doonnaa shabakadaha ugu wax -soo -saarka badan iyo dukaamada internetka.
#25 Cusboonaysiinta Magaalada
Shaqaalaha magaalooyinka waa dukaan wax iibiya oo internetka ah halkaas oo aad ka hesho xulashada gacanta labaad ee riyooyinkaaga-qiimo jaban oo UO ah. Iibso wax kasta laga bilaabo midab-xidhka ilaa jiiniska dib loo rogay, goonnada yaryar, iyo shaahyada asalka ah.
Soo -saareyaasha Magaalooyinka waa tafaariiqle hab -nololeed oo dhiirrigeliya macaamiisha iyada oo loo marayo isku -darka alaabta, hal -abuurka, iyo fahamka dhaqanka.
#24 Mirth Vintage
Murugo waa aragtida ah in canabku ku habboon yahay dharkaaga si aan kala go 'lahayn. Waxay diiradda saaraan gogo 'caadi ah, aan waqti lahayn, oo si wanaagsan loo sameeyay-waxyaabaha daruuriga ah ee maalinlaha ah si ay u xirtaan xilli-xilli kadib. Waxaa intaa dheer a ururinta dharka, qalabka, iyo kabaha laga soo bilaabo horraantii qarnigii 20-aad illaa aughts-kii hore, Mirth wuxuu ku takhasusay denim-guridda iyo noocyada kaydka iyo ogaanshaha sida loo helo lammaanahaaga qumman.
#23 Dukaanka Guryaha ee NXC
On NXC dukaan guridda, waxaad ku iibsan kartaa suufka garbaha, surwaalka ubaxa, dharka isku -dhafan, iyo dabaylaha isboortiga qiimo jaban.
#22 Tooseen guridda
Toosay Vintage wuxuu ka bilaabmay suuq yar oo ku yaal Perth, Australia 2006. Tan iyo 2012 waxay ahayd dukaan guridda leben iyo hoobiye ah oo ku yaal Brooklyn, New York.
Guriga Awoke Vintage waxaad ka heli doontaa Madadaalo, gogo 'midab dhalaalaya leh, iyo dhejisyo caadi ah, surwaal maqaar buluug ah, suuf casaan ah, iyo kaar-xarig leh ayaa ah qaar ka mid ah qaybaha taagan.
#21 Mataanaha Vintage
The Mataanaha Vintage waa aragtida ah ”dhab ahaantii looma baahna in si ballaaran loo soo saaro dharka. Waxaa jira waxyaabo badan oo qaali ah oo durbadiiba jira waana shaqadeena inaan helno oo aan siinno nolol cusub. ”
Qoraalka kore wuxuu Xrays u huray inay dib-u-beddelid ama dib-u-habayn ku sameeyaan dharka gacan-labaad si ay ugu habboonaadaan oo u gudbaan imtixaanka qiimaha sare leh. Boqolkiiba 10 wixii ka soo baxa waxay aadaan samafal.
# 20 Hood Hippie Vintage
Hood Hippie Vintage waa mareegaha wax-soo-saarka wax-ku-oolka ah ee ku saleysan Brooklyn oo ah isku-darka qabow ee Bariga la kulma Galbeedka.
Waxay ku takhasusaan dharka waddooyinka si ay u garaacaan garaafyada garaafyada iyo kimono ubaxa ah oo si fiican loo gashado shaashadda riwaayadda oo ay weheliyaan denim-caadi ah ama daboollo loo habeeyay, dhar bohemian ah oo dabayl leh oo Woodstock-era ah, ama madadaalo ah 90-kii badhanka hoos-u-fiirinta.
#19 PATAGONIA WUXUU XIRAA
Patagonia duugoobay waa astaanta dharka wax-soo-saarka ee internetka oo iibisa dharka gacanta labaad. Waxay iibiyaan nooc kasta oo dhar ah oo si tartiib ah loo isticmaalo ragga, dumarka, iyo carruurta, iyo sidoo kale qalabka dibadda loo isticmaalo oo qiimo jaban.
Kahor intaanan intaas ku sii darin, noo oggolow inaan dul tagno wax yar oo ku saabsan Patagonia, oo ah shirkad hadda haysata booska ugu horreeya noocyada dharka waarta.
Dukaanka wax soo saarka ee Patagonia wuxuu ilaaliyaa heer sare oo xakameynta tayada. Haddii aad soo dirto waxyaabo duugoobay ama jeexjeexay, way hagaajin doonaan oo adiga ayay kuu nadiifin doonaan ka hor inta aanad iibin Wer Wear.
#18 URURKA VESTIAIRE
Wadajirka Vestiaire waa dukaan wax-soo-saarka internetka ah oo loogu talagalay gabowga iyo dharka sare iyo alaabada. Waxaa lagu aasaasay Faransiiska sanadkii 2009 iyagoo damacoodu ahaa inay mar labaad ku soo celiyaan dhar qaali ah oo raaxo leh halkii ay fadhiisan lahaayeen armaajooyinka.
Boggooda internetka hadda wuxuu leeyahay dalab caalami ah, oo leh "in kabadan 7 milyan oo xubnood oo ku xeel dheer moodada oo ku yaal in ka badan 50 waddan oo ku baahsan Yurub, Mareykanka, Aasiya, iyo Australia." iyo xafiisyada Paris, London, New York, Berlin, Milan, iyo Hong Kong.
Waxay ku bixiyaan mid ka mid ah baaxadda ugu ballaadhan ee dharka naqshadeeyaha guridda quruxda badan onlaynka. Alaabtooda dhammaantood waxaa ku jira meesha sheyga si aad uga dukaameysato gudahaaga oo aad u yareyso qiiqaas maraakiibta.
#17 DIB U FIICAN
Dib uhabeyn waa heer sare Ma aha oo kaliya qaybaha run ahaantii canabka, laakiin waxay ku siinayaan sheekada gadaal gabal kasta si aad u ogaato meesha dharkaagu ka imanayo. Waxay si tartiib-tartiib ah u adeegsadeen Miu Miu, Fendi, iyo in ka badan, sidaa darteed qiimuhu wax yar ayuu ka sarreeyaa, laakiin wali waa xatooyo aad u weyn summadahan.
Ganacsade waa dukaan wax iibsi online ah oo casri ah. Waxay iibiyaan magacyada naqshadeeyaha tooska ah gaar ahaan dumarka.
Tradesy kaliya kuma bixiso naqshadeeye gacan-labaad casriga ah ee haweenka xirashada khadka, laakiin sidoo kale waxay isku dayaan inay u habeeyaan dhadhankaaga gaarka ah. Iyada oo ikhtiyaarka ah si aad u abuurto "qaab quudintaada", waxaad helaysaa fikrado ku salaysan qaabka iyo raadinta hore ama taariikhda iibsashada.
Tradesy waxay bixisaa ballanqaad 100% Xaqiijin ah. Haddii shay aad soo iibsato uusan ku qancin wixii aad maskaxda ku haysay sinaba, waxay kuu soo celin doonaan gebi ahaanba.
Boorso waa dukaan wax iibiya oo online ah oo ku takhasusay bacaha raaxada. Waxay bixiyaan qaab kasta oo suurtogal ah oo bac ah oo la malayn karo laga soo bilaabo boorsooyinka dhabarka ilaa wadarta xirfadeed.
Rebag waa dukaan takhasus leh oo leh mid ka mid ah safafka ugu waaweyn ee bacaha naqshadeeye gacan labaad la soo bandhigay.
Waxay sidoo kale dhiirrigelinayaan dib-u-adeegsiga bacaha horeba ugu jiray barnaamijkooda Is-weydaarsiga Infinity kaas oo u oggolaanaya macaamiisha inay ku soo celiyaan boorso kasta 12 bilood gudahood iyagoo leh sumcad qiimaheedu yahay 70-80% qiimaheeda iibsiga oo markaas loo adeegsan karo iibsiga xiga. Cajiib!
Poshmark waa mareegaha wax-u-dhiska ee isku-dhigga ah oo leh barnaamij iPhone/Android xitaa caan ka ah oo ka dhigaya iibsashada iyo iibinta dharka la adeegsaday khadka tooska ah ee internetka.
Dukaanka wax -soo -saarka internetka wuxuu ka badan yahay meel wax laga iibsado, waa bulsho firfircoon oo ay ku shaqeeyaan malaayiin Stylists Iibiyayaal ah, kuwaas oo aan kaliya iibin qaabkooda shaqsiyeed laakiin sidoo kale raadinaya daryeelayaashooda, iyagoo abuuraya khibradda dukaamaysiga ee ugu xiran adduunka.
Poshmark wuxuu Mareykanka ku leeyahay taageerayaal daacad u ah oo leh jaaliyado koraya oo moodada -wax -soo -saarka ku leh UK iyo Australia labadaba.
#13 IIBKA GARGAARKA QARNIGA
Gargaarka Gawaarida Lacageed waa dukaan wax -soo -saarka internetka oo ku yaal Chicago, USA. Waxay daaweynayaan dhar dhab ah, iyo alaab hore loo lahaa oo ka timid magacyada adduunka ugu sarreeya.
Waxay bixiyaan dhar gacan labaad ah oo cajiib ah, kabo, bacaha, dahabka, iyo agabka online iyo ilaa 80% qiimo dhimis ah. Haddii aad tahay qof maxali ah, booqo bakhaaradooda leben-iyo-hoobiye ee Chigaco: Gold Coast ama Dallas.
Waxay isticmaalaan a qaabka xamuulka kuwa wax iibiya oo bixiya sumadaha maraakiibta oo hore loo bixiyay iyo magaalooyinka qaarkood, adeegga qaadista.
#12 BIXINTA MAW
Sahayda MAW, oo u gaaban Ninka iyo Naagta, waa mareeg wax-kala-sooc iyo mad-madow ah oo ku yaal Houston, Texas.
MAW waxaa la aasaasay 2012 lammaane Norman iyo Rachelle Clark, kuwaas oo qora, “Waxaan ku takhasusnay bixinta macmiilkayaga noocyo kala duwan oo gaar ah, oo aad u da 'weyn, mid ka mid ah hal-gogo' oo ku habboon qaabka labka iyo dheddigga ah.
Xulashada MAW ee dharka canabka iyo alaabada ayaa xoogaa ka xadidan kuwa kale ee liiskan ku jira, waxay ku hayaan tareenka canabka ah oo la rogaya oo lagu darayo joogto ah.
#11 VINTAGE QOFKA
Xirashada iyo agabka “Vintage Casriga ah ee la soo saaray”, Persephone Vintage waa dukaan loo baahan yahay.
Haddii aad ugaarsi ugu jirtid hal-sheeko-hal-sheeko-qurxoon oo aroos ah ama qaar ka mid ah dhexda sare ee shaqadaada riyada, dukaankani wuxuu leeyahay wax yar oo wax walba ah iyo sahay aan dhammaad lahayn.
Persephone Vintage waa mid ka mid ah kuwa aan ugu jecelnahay muuqaalkeeda gaarka ah oo la soo koobay.
ARAG SIDOO KALE: 15 Siyaabood Oo Xalaal Ah Oo Dadka Lacag Loogu Siin Karo
#10 Suuqa Suuqa ASOS
On Suuqa ASOS, waxaad ka heli kartaa alaab gurracan iyo sumado dib -u -soo -noqosho ah oo hadda mar kale ku soo biiraya dunida moodada.
ASOS waa dukaan wax -soo -saarka intarneedka oo muddo dheer u go'ay. Goobta Suuqa waxay ku shaqaysaa siyaasad aan dulqaad lahayn oo ku wajahan iibsashada iyo iibinta alaabta been abuurka ah.
Marka laga reebo gogosha canabka, goobtu waxay sidoo kale ka kooban tahay iibiyeyaal madax-bannaan oo aan tiro lahayn oo sidda alaab gurracan oo dhiirran. Waxaad had iyo jeer ka heli doontaa gogosyo u gaar ah oo gaar ah Suuqa ASOS.
Etsy waa suuqa caalamiga ah ee badeecadaha gaarka ah iyo kuwa hal -abuurka leh. Waxay hoy u tahay koonkan waxyaalo gaar ah, oo aan caadi ahayn, laga bilaabo gogosha gacanta ee gaarka ah ilaa khasnadaha guridda.
Bogga internetka ee wax-soo-saarka, iibiyayaashu waxay qori karaan dharkooda gacanta labaad iyo agabka iibka ah.
Dukaankan wax -iibinta ee intarneedka ayaa fiiro gaar ah u leh sharraxaadda alaabta oo hubiya inay qaab wanaagsan yihiin.
On Etsy, waxaad ka raadisaa alaabooyin ku salaysan sharraxaaddooda oo aan daruuri ahayn magaca astaanta. Habkani waxa uu qofka awood u siinayaa in uu si weyn u eego armaajooyinka.
#8 La gariiray
Jeediyay waa dukaan online ah oo lagu iibiyo dharka iyo dharka rag iyo dumarba. Waxay sidoo kale xaq u leeyihiin lacagaha la bixinayo hadhow ka dib wax iibsiga.
Dukaan gurracan, waxay rumaysan yihiin qaab wareegsan iyo waliba fikradda ah in maro gaar ahi yeelan karto saddex ama in ka badan oo nolol ah.
Sababtoo ah shirkaddu waxay qabtaa aragti ah in macaamiisha ay aad uga walaacsan yihiin halka ay dharkoodu ka yimaadeen, iyo qiimaha dhabta ah ee mar keliya wax la xidho. Waxay soo ururiyaan sida ugu fiican ee dib -u -warshadaynta iyo hagaajinta dharka iyo alaabta.
#7 Xaqiiqda dhabta ah
ReealReal waa mareegaha wax -soo -saarka internetka oo dib u iibiya dharkii iyo qalabkii la isticmaalay. Dukaamada wax -soo -saarka internetka waxay ka shaqeeyaan a saldhig alaab, sidaa darteed waa meelo fiican oo laga helo gogosha raaxada guridda.
Waxay leeyihiin xulasho u gaar ah oo ah noocyada raaxada waana lagaa doonayaa inaad halkan ka hesho alaabta gacan labaad ee ugu tayada wanaagsan.
ReealReal leeyahay siyaasadaha dhabta ah si loo hubiyo in shay kasta oo lagu iibiyo mareegaha ay xaaladdiisu wanaagsan tahay ka hor intaan la dhajin.
Mercari waa app iibin ah oo lagu iibiyo qalabka ragga, dumarka, iyo carruurta marka lagu daro alaabta kale ee guriga oo qiimahoodu yahay gacan labaad. App -kan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka raadsato alaab noocyo kala duwan iyo kaydinta raadintaada hadhow.
On Mercari waa wax aad u fudud in la iibiyo (ama la iibsado) ku dhawaad ​​wax kasta. Marka, haddii aad haysato waxyaabo aadan isticmaalin, oo aan waligaa la isticmaalin ama si fudud uga soo bixin, tixgeli Mercari.
Mercari waxay fududeyneysaa in dharka duugga ah loo beddelo lacag qabow oo adag.
ThredUP waa mareegaha dib -u -iibinta dharka, oo bixinaya ikhtiyaar ku habboon dukaamaysiga iyo iibinta dharka gacmaha iyo carruurta ee tayada leh, kabaha, iyo qalabka.
Iyada oo ah dukaan wax -kala -soo -saarka internetka, thredUP waxay neceb tahay iibinta dharka been -abuurka ah waxayna u hoggaansan tahay dhammaan sharciyada khuseeya ka ganacsiga ka ganacsiga dharka been -abuurka ah.
ThredUP waxay dib -u -cusboonaysiineysaa dib -u -iibinta iyada oo ujeeddadu tahay inay ku dhiirrigeliso jiil cusub oo wax iibsada inay marka hore ka fekeraan gacan labaad.
#4 KA BIXIN
Depop waa mareegaha wax -soo -saarka oo jiilka soo socda ay u yimaadaan si ay u ogaadaan waxyaabaha gaarka ah. Iyada oo bulshada caalamku iibsanayso, iibinayso, iyo isku xidhka si ay moodada uga dhigto mid loo dhan yahay, kala duwan, oo qashin yar.
On Depop waxaad ka iibsan kartaa noocyada ugu waaweyn ee aad taqaan oo aad jeceshahay. Soo hel magacyo madaxbannaan oo sameeya mowjado iyo abuurayaasha gadaashooda.
LA XIDHIIDH BADAN: 13 App -ka Iibinta Khadka tooska ah ee ugu wanaagsan ee Alaabada Hore
Isweydaarsiga.com Websaytka wax -soo -saarku waa beel -yaqyaqsiyayaal halkaas oo aad ka heli karto dhar la awoodi karo oo tayo leh oo qoyska oo dhan ah.
Dukaankan wax-iibinta ee onlaynka ah ayaa ka dhigaya mid ka fudud sidii hore in lagu shaandheeyo dhar cusub oo hore loo lahaa.
Iyada oo leh in ka badan 2,000 oo ikhtiyaar gurracan ayaan hubaa in xulashada iyo xulashada ay adkaan doonto.
Amarada ka badan $ 60 waxay la yimaadaan dhoofinta bilaashka ah - markaa waa caadi in la xuso waxyar uun! Kaliya maahan inaad u ekaan doonto sidii hore sidii hore, laakiin waxaad gacan ka geysan doontaa dib -u -warshadaynta dharka iyo qashinka meelaha qashin -qubka ah.
Shay kasta oo ka soo baxa bakhaarka si fiican ayaa loo baaraa si loo hubiyo in uu waafaqsan yahay heerka shirkadda.
#2 MAINVEN VINTAGE
Dukaanka online -ka ah ee ku salaysan Brooklyn, Maeven Vintage wuxuu iibiyaa dharka guridda, dahabka, iyo alaabada.
Maeven waxaa lagu aasaasay 2012 Amy Yee (iyada oo taageero ka heleysa seygeeda iyo bisadeeda, Yoko, dabcan) oo ah riwaayad dhinac ah ka dib markii ay ka soo guurtay Chicago una guurtay New York si ay u sii wadato xirfadda farshaxanka iyo naqshadeynta. Isla markiiba, waxay heshay xamaasad isku xirtay labada:
Ku dadaal inaad akhrido sharraxaadda badeecada muddada asalka, sumadda, cabbirka calaamadeysan, cabbirka la cabbiray, dharka, iyo dabcan, sharraxaad qoto dheer oo xaaladda ah.
Maeven waa Etsy ganacsi ku salaysan.
ARAG SIDOO KALE: Sida Loo Helo Sicir -dhimista Ardayga ee eBay bisha Sebtember
Iyadoo Arbacada ah, waxaad marin u heli kartaa dhammaan noocyada dharka gacan-labaad ee gaarka ah oo ka yimid dhaqammo badan iyo waayihii adduunka oo dhan… laga bilaabo hip hop ilaa disco!
On eBay. waxaad ka heli kartaa heshiisyo aad u wanaagsan dharka qaaliga ah, kabo xarrago leh, boorsooyin gacmeedyo waaweyn, iyo dahabka jazz -ka ah. Waxaa jira qaabab iyo agabyo loogu talagalay ragga, haweenka, carruurta, iyo dhallaanka sidaa darteed hadda wax ka iibso.
Ku raaxayso maalin kasta qiimaha jaban iyo dhoofinta bilaashka ah oo leh Heshiisyada eBay. Ha iloobin inaad fiiriso Kuuboonada eBay ee xayeysiisyada soo socda.
WAA INAAD FARI KARO: Sida lacag looga sameeyo eBay adiga oo aan waxba iibin
Horumarka dhow ee tignoolajiyada iyo jiritaanka dukaamada wax-soo-saarka, waxaa laga yaabaa inaadan kharash badan ku bixin dharka ama agabka. Dhab ahaantii, waxaad si fudud uga iibsan kartaa xirashada xarrago leh iyo qalabyada gurigaaga oo aad ku iibsan karto qiimo jaban.
Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadaha Bilaashka Ah Adigoon Dhammeystirin Soo -jeedimaha 2022 -ka
5 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo Daawashada Netflix sanadka 2022
U dhigma Sharadka USA: Sida loogu guuleysto Lacag wax ka yar 15 Daqiiqo | 2022 La cusbooneysiiyay
Focus Forward Transcription: Sida ay u shaqayso | Sida loo helo
Kaarka Amaahda Hore ee Navy: Waxa Aan Laguu Sheegin 2021
Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato wax iibsiga adoon jebin miisaaniyadaada, waa inaad tixgelisaa inaad hesho Navy Old…
35 Alaabada Ugu Fiican Si Looga Dayriyo 2021: Cashout ugu Dhaqsaha badan
Kobcinta dropshipping wuxuu ahaa mid soo jiidasho leh. Laga soo bilaabo JCPenny Sears' ee 1963 ilaa CompuCard iyo…
Waad ogtahay inaad casho u baxdo kali ama lammaane ay sahlanaanayso. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso…
34 Hadiyadaha ugu Fiican $ 5 (Ama Ka Yar!) Waxaad u Heli Kartaa Kuwaad Jeceshahay 2021
Ka fikirida hadiyadda ugu fiican ee aad u gadato qofka aad jeceshahay waxay noqon kartaa mid daal badan gaar ahaan marka aad haysato…